वैदेशिक रोजगार,सुरक्षा गार्ड को पिडा । सरकार सङ गुहार । – Namaste Dainik
वैदेशिक रोजगार,सुरक्षा गार्ड को पिडा । सरकार सङ गुहार ।
April 9, 2020 NamastedainikLeaveaComment on वैदेशिक रोजगार,सुरक्षा गार्ड को पिडा । सरकार सङ गुहार ।
स्यङ्जा-६ सेतिदोभन का बिबस गजुरेल भन्छन ।
म मलेसियामा तीन वर्षदेखि कार्यरत छु । पहिले रमाई रमाई काम गरिन्थ्यो, अहिले डराई डराई काम गर्नु परेको छ । पहिले र अहिलेमा काम गराई पनि फरक छ । पहिले रहर सपना पूरा गर्नु थियो,तर अहिले ज्यान जोगाउनु छ । परदेशी भूमीमा कहाँ मान्छ र मन ? तर बाध्यता छ ।
सोच त आफ्नो देशमै केही गर्ने थियो । काम नखोजेको पनि होइन । धेरै भौतारिएँ, तर हात पाखुरा बजार्ने मेलो नमिलेपछि आफ्नो घर परिवार चलाउन परदेश आएको हुँ । तर आज यो कोरोनाले के गर्यो। महिनामा तलब पाएको छैन । सबै बजारहरु बन्द छन् ।
बाहिर निस्कंदा प्रहरीले भेट्यो भने जेल सजाय हुन्छ । त्यसैले पनि ननिस्कौं भन्छु म सबैलाई । कतिपय साथीलाई त खान बस्नको पनि समस्या छ । म चाहिँ यहाँ सुरक्षा गार्डको काम गर्ने भएकाले जोखिम मोलेरै काम गर्नुपर्छ । मन बलियो बनाएर काममा निस्कन्छु । तर मन डर त कति लाग्छ लाग्छ नि । कहिलेकाहीँ त यतै मरिन्छ कि झैं लाग्छ । उता घरबाट बुवाआमाले खाने खर्च छैन पठाइदेउ भनिरहनुभएको छ । यहाँ सबै बैंक बन्द छ कसरी पठाउनु ?
हामीले यतिका वर्ष रेमिट्यान्स पठाएर देस को अर्थतन्त्र टीकाइ राखयौ । सरकार अब देशमै केही गर्ने वातावरण बनाउ । म नेपालमै केही गर्न चाहन्छु । मेरो गाउँठाउँमा बुवाआमाको काखमा बस्ने रहर छ । रहरले होइन घरको छाक टार्न बिदेसिएको हुँ । सरकार अब त हामीलाई स्वदेश फर्काउ ।
थप १० जनामा कोरोना पुष्टि, नेपालमा संक्रमितको संख्या २९१ पुग्यो !